ဘယ်သူတွေက သျှမ်းနီတွေလည်း ~ Shannilay
ဘယ်သူတွေကသျှမ်းနီတွေလည်း သျှမ်းနီတွေက ဘယ်မှာနေလည်း သျှမ်းနီတွေကုို ဘယ်သူသိလည်း သျှမ်းနီတွေကို ဘယ်သူချစ်သလဲ ...
မပြောမပြီး မတီးမမြည်ဆုိုရုိုးစကားအတုိုင်း ပြောရပေမည် တိုင်းလိုင် ( ရှမ်းနီ) အမျိုးသားများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ (TNDP) ပါတီ ပေါ်ပေါက်လာမှ ဟာ... သျှမ်းနီဆုိုပါလား ဒါဆုိုရင် သျှမ်းဖြူ ၊သျှမ်းနက်ဆုိုတာရော ရှိသေလားဟု?? မေးလားသော သမုိုင်းမသိ မလေ့လာသော အချို့သောတုိုင်းရင်းသားများ ခနဲ့တဲ့တဲ့ ရွဲ့တဲ့တဲ့များ ခင်ဗျာ သျှမ်းနီ၊ သျှမ်းဖြူ ၊ သျှမ်းနက် တကယ်ရှိသည်။ သိချင်ရင်ဒီမှာသွားဖတ် - *@*
အခြားသူများကုိုပြောရသည်ထက် အင်ဂျီအုို တန်ဂုိုးနဲ့ မျိုးဂုဏ် တက်စေမည် ဆုိုတဲ့ ကျနော်တုို့ သျှမ်းများကုိုပြောနေရသည်က ရှက်ဖုို့ကောင်းသည်။ သျှမ်းဆုိုတာ တမျိုးထဲရှိရမယ် တပါတီထဲရှိရမယ် ဆုိုတဲ့စကားဟာ ခေတ်မမှီတော့တဲ့ ကွန်မြူနစ် အတွေးအခေါ်ရှိသူတွေပါ။ အမျိုးချစ်သာလား အမြစ်ကုို ချိုးနေသာလားဆုိုတာ ကုိုယ်ဘာကုိုယ် စဉ်းကြည့်ကြပါ။
ကျနော်တင်ပြလုိုတာက သျှမ်းနီကုိုချစ်ကြတဲ့ သျှမ်းခေါင်းဆောင်များဟာ မြန်မာနုိုင်ငံမပေါ်ပေါက်ခင်ထဲက ရှိခဲ့တာပါ ယခုလည်းရှိတယ် နောက်လဲရှိနေဦးမယ် သျှမ်းနီချစ်တဲ့ သျှမ်းများဖြစ်နုိုင်ကြပါစေ.
၁၉၇၂ နုိုင်ငံတော် သမ္မတထံ တင်သွင်းခဲ့သော စာတမ်း သျှမ်းနီအမျိုးသား ဘုိုးကျော်ဟိန်း (ကွယ်လွန်) အုိုးတန်းရပ် မုိုးကောင်းမြို့ တုိုင်းလုိုင်ခေါ်သျှမ်းနီ အမျိုးသားနယ်မြေဖြစ်သော Part Two (ခေါ်) ဘုရင်ခံက အုပ်ချုပ်ရေးသီးသန့်ထားရှိသော နယ်မြေများ The Shan States specified in Notification No.41, dated 5th October, 1922, of the Political Department of the Government of Burma, as amended by any subsequent notification made before the commencement or this Act other than the Federated Shan State. ဖက်ဒရယ် သျှမ်းပြည်ထောင်စုတွင် ထည့်သွင်းခြင်းမပြုသည့် သျှမ်းစော်ဘွား နယ်ဖြစ်သော သောင်သွတ်နယ်၊ ဆင်းကလိန်ခန္တီးနယ်၊ ခန္တီးလုံနယ်တို့ဖြစ်သည်။ (ယခုလက်ရှိ စစ်ကိုင်းတိုင်း မြောက်ပိုင်းတွင် စုစည်းပါဝင်သည်။) ကချင်ပြည်နယ်တွင်း ဗန်းမော်ခရုိုင်၊ မြစ်နားခရုိုင်၊ ကသာခရုိုင်နဲ့၊ ၀န်းသုိုစော်ဘွားပုိုင်နယ်မြေများအား ကျွန်ပ်တုို့ တုိုင်းလုိုင် သျှမ်းနီများအား ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ခွင့် နယ်မြေများအဖြစ်ပေးရန် တင်ပြအပ်သည်။
ဦးစောထွန်းရင် (ကွယ်လွန်) သည် ၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် အတည် ပြုပြဌာန်း ခဲ့သော နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ မှုကြမ်း ရေးဆွဲစဉ် ကာလက ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် တိုင်းလျဲန် (ရှမ်းနီ) အမျိုးသား တဦးဖြစ်ပါသည်။ ၁၉၇၄ ခုဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် တဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း ပုပုဂ္ဂိုလ်သည် လူမျိုးတမျိုဟု သတ်မှတ်ခေါ်ဆိုနိုင်သည့် အမျိုးသား လက္ခဏများ ဖြစ်သော ပြောဆိုသည့် စကား ကိုယ်းကွယ်သည့် ဘာသာ၊ ရိုးရာစာပေ ယဉ်ကျေးမှု၊ နေထိုင်ရာ တဆက်တည်းသော နယ်မြေ၊ တူညီသော သမိုင်းအစဉ်အလာ၊ တူညီသော အခြေခံစည်းပွားရေး၊ စသည့်အချက်များနှင့် ပြည့်စုံသော အထက်မြန်မာနိုင်ငံ ဧရာဝတီနှင့် သလ္လာဝတီ (ချင်းတွင်း) မြစ်ရိုး မြေပြန့်ဒေသရှိ သျှမ်းအမျိုးအ နွယ်များ၏ နယ်မြေကိုစုစည်း၍ ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင် မြေလပ်သျှမ်းပြည်နယ် (တိုင်းလျဲန်ပြည်နယ်) သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းပေးရန် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပေဒေ ရေးဆွဲရေး ကော်မရှင်သို့ ၂၄-၂-၇၂ ရက်နေ့စွဲပါ စာတမ်းဖြင့် တရားဝင်အဆိုပြု တင်ပြခဲ့ သူဖြစ်ပါသည်။ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဦးထွန်းရင်အား နိုင်ငံတော် သစ္စာဖေါက် ကျူးလွန်သည်ဟု ၆-၁-၇၆ ရက်နေ့တွင် မန္တလေးအရှေ့တောင်တရား သူကြီးရုံးမှ စီရင်ဆုံး ဖြတ်၍ ထောင်ဒဏ် တစ်သက်တစ်ကျွန်း ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါသည်။ အကျယ်တ၀င့် နောက်မှ တင်ဆက်မည်။
တုိုင်း သုို့မဟုတ် ကုိုယ်ပုိုင် အုပ်ချုပ်ခွင်ရဒေသ လျဉ်းသော အကြံပြုချက် စာတမ်းများတင်ပြ ( မြန်မာ့အလင်း သတင်းစား ၁-၄-၉၅
ကျွန်တော်ကတော့ သျှမ်းတုိုင်းရင်းသားများ ဒီမုိုကရေစီအချုပ် သီပေါမြို့နယ်မှ ကုိုယ်စားလှယ် ဦးခွန်ထွန်းဦး ဖြစ်ပါတယ်။ အခုကျတော် ဆွေးနွေးအကြံပြုမယ့် အချက်တွေဟာ သဘာဝတရားနဲ့ ဆီလှော်မှုရှိစေခြင်း။ ဒေသရှိသက်ဆုိုင်ရာ ပြည်သူအတွင်း ညီညွတ်မှု နားလည်မှုရှိစေခြင်း။ ပြည်ထောင်စုကြီးရဲ့ စည်းလုံးညီညွတ်မှုကုို အထောက်အကူပြုနုိုင်ခြင်း။ ပြည်ထောင်စုကြီးအတွက် အထောက်ကူပြုနုိုင်မယ့် အခြေခံကောင်းများ ရရှိစေခြင်းစတဲ့ အချက်တွေကုိုအခြေခံပြီး ဆွေးနွေးခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာပြောလုိုပါတယ်။ ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိုင်း တုိုင်းသုို့မဟုတ် ကုိုယ်ပုိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့် ရဒေသနှင့် စပ်လျဉ်းပြီး ကျွန်တော်ပြ လုိုပါတယ်။ တုိုင်းလုိုင်အနွယ်ဝင် သျှမ်းမျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ကြတဲ့ တုိုင်းနေ၊ တုိုင်းမော၊ တုိုင်းခမ်းတီ၊ တုိုင်းဆာ၊ တုိုင်းဖွန်း၊ တုိုင်းကဒူး၊ တုိုင်းကနန်းစတဲ့ တုိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြည်ထောင်စု နုိုင်ငံကြီး မပေါ်ခင်တည်းက သမုိုင်းအစဉ်အလာကောင်းနဲ့ နေထုိုင်လာခဲ့ကြတဲ့ ဒေသခံ ပင်မတုိုင်းရင်းသား တွေဖြစ် ပါတယ်။ နုိုင်ငံသမုိုင်းမှတ်တမ်းမှာ လူမျိုးနာမည် အမျိုးမျိုးပြောင်းကာ မှတ်သားခြင်းကြောင့်သာ မှေးမှိန်နေရတဲ့ လူမျိုးကြီးတစ်မျုိုးဖြစ်ပါတယ်။
-တုိုင်းလုိုင်တွေဟာ အများနည်းတူ ပြည်ထောင်စုဖွား ပင်ရင်းတုိုင်းရင်းသားများဖြစ်ကြတဲ့အတွက် ညီလာခံညီလာခံလုပ်ငန်း ကော်မတီ ဥက္ကကြီး ရှင်းလင်းသွားသလုိုပဲ မိမိတုို့ရဲ့ ညီအစ်ကုိုတော် တုိုင်းရင်းသားများ ရသင့်ရထုိုက်တဲ့ အခွင့်ရေးတွေကုို အမြန်ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်ပေးဖုို့ ဆုိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက် အကောင်အထည်ဖော်မှုမျိုးမျှော်လင့် စောင့်စားနေကြမှာပါ လွတ်လပ်ရေး သက်တမ်းနှင့်အမျှ တောင့်တ စောင့်ဆုိုင်း ခဲ့ရတဲ့ ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်ရေးဆီကုို လမ်းဖွင့်ပေးခဲ့မယ်ဆုိုရင် တုိုင်းလုိုင်အုပ်စုဝင် လူမျိုးနွယ်စု အားလုံးတုို့ဟာ အများနည်းတူ ကြည်နူးဝမ်းသာလာရမှာပါ၊
- တုိုင်းရင်းသား တုိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကုိုလည်း ပုိုမုိုကျစ်လစ် ခုိုင်မာစေမှာဖြစ်ပါတယ်။
-ထုို့ကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်နှင့် စစ်ကုိုင်းတုိုင်းရှိ မြို့နယ်များဖြစ်ကြတဲ့ ရွှေကူ၊ မန်စီ၊ မုိုးမောက်၊ ဗန်းမော်၊ မြစ်ကြီးနား၊ ၀ုိုင်းမော်၊ ကားမုိုင်း၊ တနုိုင်း၊ မုိုးညှင်း၊ မုိုးကောင်း၊ ခမ်းတီး၊ ဟုမ္မလင်း၊ တမှုး၊ ဖောင်းပြင်၊ မော်လုိုက်၊ ပင်လယ်ဘူး၊ အင်းတော်၊ ဗန်းမောက်၊ ကသာ၊ ကော်လင်း၊ ၀န်းသုို၊ ထီးချိုင့်တုို့တွင် နေထုိုင်ကြတဲ့ ဆန္ဒခံယူပြီး တုိုင်းလုိုင် ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတုိုင်း (သုို့မဟုတ်) ဒေသ သတ်မှတ်ပေးနုိုင်ရန် တင်ပြလုိုက်ရပါတယ်။
-ကျွန်တော်ကတော့ သျှမ်းတုိုင်းရင်းသားများ ဒီမုိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်မှ ဦးစုိုင်းစုိုးညွန့် ဖြစ်ပါတယ် အခြေခံ ဥပဒေကုို ရေးဆွဲတဲ့နေရာမှာ လျစ်လျူရှု ခံထားရတဲ့ လူမျိုးစုကြီးများ အရေးကိစ္စရှိခဲ့သည် အခုပါနဲ့ပါဆုိုရင် အဲ့ဒီလူမျိုးအတွက် သုံးကြိမ်သုံးခါ ဖြစ်သွားနုိုင်ဖွယ်ရှိနေတယ်လုို့ သတိချပ်မိနုိုင်ဖုို့တင်ပြလုိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် လက်ရှိ အခြေခံ ဥပဒေမှာ ၁၉၄၇။ ၁၉၇၄ များမှာလုိုပဲ တင်ပြတောင်းဆုိုမှုတွေရှိပါလျက်နဲ့ လျစ်လျူရှု ခံရခြင်းမျိုးထပ်မဖြစ်ရလေအောင် အထူးစဉ်းစားပြီး အဲ့ဒီလူမျိုးတွေရဲ့ အရေးအတွက် ပါဝင် ရေးဆွဲပေး သွားဖုို့ အထူးလုိုအပ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလူမျိုးများကတော့ စစ်ကုိုင်းတိုင်းအထက်ပုိုင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ် အောက်ပုိုင်း တွေမှာ ပျံ့နှံ့နေထုိုင်ကျတဲ့ တုိုင်းလုိုင်၊ တုိုင်းနေ၊ တုိုင်းမောဝ်၊ တုိုင်းဆာ၊ တုိုင်းခမ်းတီး၊ တိုင်းကဒူး၊ တုိုင်းကနန်း၊ တုိုင်းခွမ်းစတဲ့ တုိုင်းလိုင်အနွယ်ဝင်တုို့ ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။
တုိုင်းလုိုင်လူမျိုးတုို့ဟာ ကချင်မဟုတ်သူများ (Non- Kachin) အဖြစ်နဲ့သာ သတ်မှတ်ခံရကာ အမည်ပျောက် လူမျိုးအဖြစ် အဖျောက်ခံရ ကာနှစ်နာရတဲ့ လူမျိုးနွယ်စု၊ လူမျိုးများစု ဖြစ်နေရပါတယ်။ အလားတူပဲ စစ်ကုိုင်းတုိုင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ် မီးရထား သံလမ်း ရုိုးတလျှောက်တွေမှာ သျှမ်းဗမာလူမျိုးအဖြစ်နဲ့သာ သိရှိကြပြီး ပင်ရင်းတုိုင်းလုိုင်လူမျိုး အမည်ရင်းဟာ မေးမှိန်နေခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မည်သည့် အရပ်မှာနေပါစေ တုိုင်းလုိုင်ဟာတုိုင်းလုိုင်လူမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အနှစ် ၄၀ ကျော်မက လျစ်လျူ ရှုထားခြင်း ခံကြရတဲ့ ဒီတုိုင်းလုိုင်နဲ့ တုိုင်းအနွယ်ဝင်များတုို့ အရေးအတွက် ဒီတတိယအကြိမ် အခြေခံ ဥပဒေ ရေးဆွဲရေးအတွက် အခြေခံမှုများချမှတ်တဲ့နေရာမှာ အခြွင်းချန် ထားမိဖုို့ အထူးအရေးကြီး လှပါတယ်။ ဒီမျိုးနွယ်စုတုို့ဟာ ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင် ပြည်နယ်များ အဆင့်ထိ ရရှိသင့်တဲ့ အခြေခံလက္ခဏာများ အပြည့်စုံ ရှိခဲ့ပြီး ဖြစ်ရုံမက ပြည်ထောင်စုပေါ်လဲ အမြဲသစ္စာရှိရှိ စောင့်သိရုိုသေ ကာကွယ်လာကြတဲ့အတွက် နယ်မြေများ သတ်မှတ်ပေးဖုို့ ရှိလာပါက တုိုင်းရင်းသားတကာ့ တုိုင်းရင်းသားထဲမှာ တုိုင်းလုိုင်များဟာ ပထမဦးဆုံး မှာ ထားရှိပြီး စဉ်းစား သတ်မှတ်ပေးရမည်သာဖြစ်သင့်ကြောင်း အလေးနက်ထားတင်ပြလုိုပါတယ်။
-တုိုင်းလုိုင် ကုိုယ်ပုိုင်လုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသမှာ ဗန်မော်ခရုိုင်ရှိ ဗန်မော်၊ မုိုးမောက်၊ မန်စီ၊ ရွှေကူမြို့နယ် များအတွင်းရှိ မြေပြန့်ဒေသများအားလုံး၊ မြစ်ကြီးနား ခရုိုင်အတွင်းရှိ မြစ်နား၊ ၀ုိုင်းမော်၊ မုိုးကောင်း၊ မုိုးညှင်း၊ ကားမုိုင်း၊ မုိုင်းခွမ်းခေါ် တနုိုင်းရှိ မြေပြန့်ဒေသများအားလုံး၊ ၀န်းသုိုစော်ဘွားပုိုင် နယ်မြေများဖြစ်ကြတဲ့ ကသာခရုိုင်အတွင်းရှိ ကသာ၊ အင်းတော်၊ ထီးချိုင့်၊ ဗန်းမောက်၊ ကော်လင်း၊ ၀န်းသုို၊ ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်များ၊ ကလေးခရုိုင်ရှိ ကလေး၊ ဖောင်းပြင်၊ တမှုး၊ ကလေးဝ၊ မော်လိုက်၊ မိန်းကန်းနယ်များကုို လည်းကောင်း၊ ဆင်းကလိန်၊ ခန္တီးစော်ဘွား နယ်များဖြစ်တဲ့ ခန္တီးခရုိုင်ရှိ ခန္တီး၊ ဟုမ္မလင်း၊ နမ့်ယွန်း နယ်များကုိုလည်းကောင်း တုိုင်းလုိုင် ကုိုယ်ပုိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ဒေသအတွင်းသုို့ ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ပေးပါရန် လူသိရှင်ကြား တတိယမ္ဗိ အလေးအနက်ထားပြီး အကြံပြုတင်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်ကတော့ သျှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပုိုင်း အထူးဒေသ (၃)မှ ကုိုယ်စားလှယ် ဦးစုိုင်းနောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
-ကျွန်တော်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တုို့ သျှမ်းပြည်နယ် အထူးဒေသ (၃)မှ ဒေသခံပြည်သူများနှင့် ညှိနုိုင်းပြီး ၎င်းတုို့၏ ဆန္ဒသဘောထားနှင့် အညီတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သဘာပတိကြီးခင်ဗျား= တုိုင်းဒေသကြီး သုိုမဟုတ် ပြည်နယ်ရရှိပြီးသည့် တုိုင်းရင်းသားလူမျိုးများမှအပ ဆုိုတဲ့ အခြေခံမှုမရှိသင့်ပဲ တုိုင်းဒေသကြီး သုို့မဟုတ် ပြည်နယ်ရရှိပြီးသော တုိုင်းရင်းသား လူမျုိုးတမျိုးသည် အခြားတုိုင်းဒေသကြီး သုို့မဟုတ်ပြည်နယ် တစ်ခုခုတွင် လျော်ကန် သင့်မြတ်သည့် လူဦးရေရှိပြီး နယ်မြေ တစ်ဆက်တည်းတွင် စုစုစည်းစည်း နေထုိုင်ကြသည့် တုိုင်းရင်းသား လူမျိုးများကုို (ကုိုယ်ပုိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တုိုင်း သုို့မဟုတ် ကုိုယ်ပုိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စုများ) ပေးသင့်ပါသည်။ ဒါမှပဲ အခြားတုိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်များတွင် ရှိနေသော တုိုင်းဒေသကြီး သုို့မဟုတ်ပြည်နယ် ရရှိပြီးသော လူမျိုးစုများဟာ မိမိမျိုးနွယ်စုများ ကဲ့သုို့သော အခွင့်အရေးများ ရရှိနုိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တုိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်နယ်ထဲရှိ မျိုးနွယ်စုများသာ အခွင့်ရေးရရှိပြီး တနုိုင်ငံထဲနေ ညီအကုိုဖြစ်လင့်ကစား အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေမယ်ဆုိုရင် သဘာဝမကျတဲ့အပြင် တုိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကုိုယ်ပင် ထိခုိုက်နုိုင်ပါတယ်။
ဥပမာ- စစ်ကုိုင်းတုိုင်းအထက်ပုိုင်းနဲ့ ကချင်ပြည်နယ် အောက်ပုိုင်းဒေသများမှာ စုစည်းနေထုိုင်ကြတဲ့ တုိုင်းလျှန်း၊ တုိုင်းနေ၊ တုိုင်းဆာ၊ တုိုင်းခမ်းတီး၊ တုိုင်းကတူး၊ တုိုင်းကနန်း၊ တုိုင်းခွမ်းစတဲ့ သျှမ်းမျိုးနွယ်ဝင် များကုိုလည်း သင့်လျော်တဲ့ ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စု များသတ်မှတ်ပေးရန် တောင်းဆုိုတင်ပြလာပါက အဲ့ဒီသျှမ်းမျိုးနွယ်ဝင်များဟာ ယခု ကျွန်တော်တုို့ (ကုိုယ်ပုိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တုိုင်း) သုို့မဟုတ် (ကုိုယ်ပုိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ စီရင်စု) ပေးသင့်တဲ့ လူမျိုးစုများရဲ့ အင်္ဂါရပ်နဲ့လည်း ညီနေပါတယ်။
-သူတုို့ဟာလျော်ကန်သင့်မြတ်တဲ့ လူဦးရေရှိပြီး နယ်မြေ တစ်ဆက် တစ်စပ်တည်းတွင် စုစုစည်းစည်း နေထုိုင်ကြတဲ့ မျိုးနွယ်စုများ ဖြစ်ပါတယ်။ သူတုို့ဟာ ဒီကနေမှ မိမိမျိုးနွယ်စုအပေါ် မိမိကုိုယ်တုိုင် စိမံလုိုတဲ့ ဆန္ဒရှိခဲ့သာ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနုိုင်ငံကုို ဗြိတိသျှတုို့ အုပ်စုိုးစဉ်က တုိုင်းလျှန် အမျိုးသားတုို့ နေထုိုင်တဲ့ နယ်မြေကုို (၁၉၃၅) ခုနှစ် မြန်နုိုင်ငံ စီရင်အုပ်ချုပ်မှု ဥပဒေဇယား (၂) အပုိုင်းဒေသ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ကချင်တောင်တန်း ဒေသမှာ ဇယား (၁)တွင် ပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရပါတယ်။
-ပင်လုံညီလာခံမှာ ယင်း အပုိုင်း (၂) အပါဝင် ဗန်းမောနှင့် မြစ်ကြီးနားခရုိုင် နယ်မြေများကုို ကချင်ပြည်နယ်အဖြစ် ပါဝင်ထည့်သွင်း သတ်မှတ်ဖုို့ တောင်းဆုိုချက် များဟာ (၁၉၃၅) ခုနှစ် ဥပဒေနဲ့ အံမ၀င် ဖြစ်တာကြောင့် ပင်လုံညီလာခံ ပျက်လုနီးပါး ရောက်သွားသည်အထိ ဖြစ်သွားခဲ့တာ သိရပါတယ်။
အကြောင်းရင်းကတော့ … ဗုိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းက ဒေသ (၂) ဟာ ကချင်လူမျိုးတွေရဲ့ ဒေသမဟုတ်၊ တုိုင်းလျှန်တုို့ရဲ့ ဒေသသာဖြစ်တဲ့ အတွက်ကြောင့် သဘောလုံးဝမတူဘဲ ရန်ကုန်သုို့ ပြန်ရန်ပင် စီစဉ်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။
- (၂၁- ၄- ၄၇) ရက်နေ့မှာ ဗန်မော်ခရုိုင် မြေပြန့်ဒေသမှ ရွေးချယ်စေလွှတ်လုိုက်တဲ့ ဦးဘုိုးထီ၊ ဦးစောရီ၊ ဦးဘဆင်တုို့က တောင်တန်းဒေသ စုံစမ်းရေးအဖွဲ့ ကုိုသွားရောက် တွေ့ဆုံပြီး သူတုို့ရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကုို တင်ပြခဲ့ကြပါတယ်။ အသင့်ရေးထားတဲ့ စာတမ်းကုိုလည်း စုံစမ်းရေး အဖွဲ့ ဥက္ကဌထံ ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
-သူတုို့ရဲ့ထွက်ဆုိုချက်စာတမ်းမှာ ဗန်မော်ရှိ လူထုနဲ့ ကျေးရွာ (၂၂)ရွာကုို ပေါင်းပြီး အစည်းဝေ တရပ် ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ အစည်းအစေးမှာ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်မည့် ကချင်ပြည်နယ် သစ်ထဲသုို့ ဗန်းမော်နှင့် မြစ်ကြီးနားခရုိုင် မြေပြန့်ဒေသ ထည့်သွင်းဖုို့အတွက် ဗြိတိသျှ အာဏာပုိုင် တုို့ရဲ့ လျှို့ဝှက် ဆောင်ရွက်ချက်ကုို ရှုတ်ချတယ်လုို့ ဆုံးဖြတ်ကြောင်း၊ ကချင်ပြည်နယ်သစ် ဖွဲ့စည်းပေးဖုို့ မြေပြန့် ဒေသများကုို ဖဲ့ပေးရမယ်ဆုိုတဲ့ အဆုိုပြုချက် မှန်သမျှကုို မိမိတုို့လက်ခံမည် မဟုတ်ကြောင်း၊ သဘောတူနုိုင်မည် မဟုတ်ကြောင်း ထွက်ဆုိုဖော်ပြထားတာကုို တွေ့ရပါတယ်။
အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်စာတမ်းကုို ဦးဘုိုးထီ၊ ဦးစောရီ၊ ဦးဘအောင်၊ ဦးဘဆင်တုို့က လက်မှတ်ရေးထုိုး တင်ပြခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၁၉၄၇ ခုနှစ် စက်တင် ဘာလ (၂၄)ရက်နေ့ မှာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေပုဒ်မ (၆) ကုိုအောက်ပါအတုိုင်း ပြဌာန်း အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။
- မြစ်ကြီးနားနှင့် ဗန်မောခရုိုင် များဟူ၍ ယခင်က ခေါ်တွင်ခဲ့သော နယ်မြေများကုို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနုိုင်ငံ အတွင်းတွင် ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင် တစ်ခုအဖြစ် ဖွဲ့စည်းရမည်။ ထုိုပြည်ထောင်စုအဖွဲ့ဝင်ကုို ဤမှနောင်အဖုို့ ကချင်ပြည်နယ်ဟု ခေါ်တွင် မည်လုို့ ဖြစ်လာတဲ့ အတွက် တုိုင်းလျှန် လူမျိုးများဟာ အခွင့်ရေး ဆုံးရှုံးနစ်နာခဲ့ရပါတယ်။
(မှတ်ချက် - အထက်ပါ သျှမ်းမျိုးချစ် ပုဂ္ဂိုများ၏ ညီလာခံ တင်သွင်းခဲ့သော အချက်များသည်။ မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာပါ စားလုံးများကုို ရှမ်း/ သျှမ်းလုို့ရေး သည်မှလွဲ၍ ကျန်အားလုံး မှုရင်းစာသား များဖြစ်သည်။)
ယခု တုိုင်းလုိုင် သျှမ်းနီမြေပုံသည်လည်း သတင်းစာပါ မြေပုံသာဖြစ်သည်။
နောင်တခေတ် သျှမ်းလူငယ် ယင်းသျှမ်း ခေါင်းဆောင်ကြီးများလုို အမျိုးသားရေး အတွက် ရဲဝံ့ပြတ်သားစွာ ဆောင်ရွက်နုိုင်ကြပါစေ။
** စာရေးသူကုိုယ်တုိုင်တွေ့ဆုံမြေးမြန်းချက်... ( (၆၆)နှစ်မြောက် သျှမ်းပြည်နယ်နေ့ အခမ်းအနားပြီး ၈ရက် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၂ ) RCSS/ SSA ဒုတိယ ဗုိုလ်ချုပ်ကြီးယွတ်စစ် လွယ်တုိုင်းလျန်ဌာနချုပ် **- ဟုိုပေါင်လုံခါ့ ( ဥက္ကဌကြီး ခင်ဗျား သျှမ်းပါတီ နှစ်ခုရှိရာ အခုသျှမ်းနီပါတီပါ တုိုးလာတဲ့အတွက် သုံးပါတီဖြစ်လာတယ် ဒါကုို ဘယ်လုိုမြင်ပါသလဲ ခင်ဗျာ **- သျှမ်းပါတီသုံးခုစလုံးကုို ကျနော်တုို့ အားပေးပါတယ် အခုကသူတုို့က စတင်ပြီးတော့ ပါတီတွေတည်ထောင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ် ဒီကြားထဲမှာ သျှမ်းပါတီတွေ အချင်းချင်းအမြင်သဘောထားမကွဲလွဲကြဖုို့ အတုိုက်အခံမဖြစ်ကြဖုို့တော့ ကျနော်တုို့ အကြံပြုထားပါတယ် ဒီမုိုကရေစီနည်းလမ်းပေါ်မှာပဲ ပါတီတွေလုပ်ဆောင်သွားကြဖုို့ ကျနော်အကြံပြုတာရှိပါတယ်။
**- ကချင်ပြည်နယ်နဲ့ စစ်ကုိုင်းတုိုင်းထဲက သျှမ်းတွေအတွက်ရော စဉ်းစားထားတာတွေရှိလား ခင်ဗျာ **- ကျနော်တုို့ ပြည်ထောင်စု အတွက်တွေးတယ် ဒါကြောင့်မုို့ ကျနော်တုို့ အားလုံးအတွက် တွေးတယ် ဒါကြောင့်မုို့နေရာတုိုင်းမှာရှိတဲ့ သျှမ်းတွေအတွက်တွေးတယ် ဟုပြောဆုိုခဲ့ပါသည်။
** စာရေးသူကုိုယ်တုိုင်တွေ့ဆုံမြေးမြန်းချက်... ယာန်ဆုိုသောသျှမ်းသမုိုင်း စာအုပ်ကုိုရေးသား ပြုစုသူ သျှမ်းသမုိုင်း သုတေသီ - မယ်ခူးခေးရှဲန် ချင်းမုိုင် (၂၅ ရက် အောက်တိုဘာလ ၂၀၁၂ ) **- မယ်ခူးခါ့ အခု သျှမ်းနီတွေ ပါတီထောင်ကြပြီ မယ်ခူးဘယ်လုိုမြင်ပါသလဲ **- အေးကောင်းတယ် သျှမ်းတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာက ပါတီထောင်တာပဲ ကောင်းတယ် တခြားကရင်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ်
ဖြူး၊ မုံရွာဘက်က သျှမ်းတွေရော ခေါ်ပေးပါ။ အေး သျှမ်းပါတီတွေ သုံးပါတီပဲရှိရှိ သျှမ်းအရေးဆုိုရင် အသံတသံထဲထွက်ဖုို့လုိုတယ် လွှတ်တော်မှာ တပါတီထဲကပဲ သျှမ်းအရေးပြောမယ်ဆုိုရင် တသံပဲထွက်မယ် သျှမ်းသုံးပါတီက ပြောမယ်ဆုိုရင် အသံသုံးသံထွက်မယ် ပါတီတွေညီဖုို့လုိုတယ် ဟုပြောသည်။
**- မယ်ခူးခါ့ အခု သျှမ်းနီတွေက နောက်လုပ်ပေးမဲ့ မှတ်ပုံတင်မှာ လူမျိုးကုို သျှမ်းနီ ဆုိုတာ ထဲ့ပေးပုို့ တောင်းဆုိုနေတယ် ဟုပြောရာတွင် မယ်ခူးက **- အေးသိတယ်ဟုဆုိုကာ အတန်ငယ် ငြိမ်သက်ပြီး မျက်ရည်ဝဲကာ ကုိုယ်ကုိုတုိုင် သျှမ်းဖြစ်ရဲ့သားနဲ့ ငါတုို့ ကုို သျှမ်းဖြစ်ဖုို့ပေးပါ ငါတုို့ဟာသျှမ်းတွေပါလုို့ ပြန်တောင်းနေရသာလောက် ၀န်းနည်းကျေကွဲစရာဘယ်ဟာရှိလည်း အဲ့ဒီလောက်နားကျည်းစရာလည်း ကောင်းတာရော ဘာရှိဦးမလဲဟု ပြောဆုိုသည်။
အထက်ပါ သျှမ်းအမျိုးသားရေး ခေါင်းဆောင်ကြီးများက အများထင်သလုို သျှမ်းနီတွေဟာ သျှမ်းကခွဲ ထွက်တာမဟုတ်ပဲ မိမိရပုိုင်ခွင့်အရေးများကုို ဆုံးရှုံးနေလုို့ တောင်းကြကြောင်းကုို ရင်ထဲကရော အသည်းကပါ လက်ခံပြီး သျှမ်းနီချစ်တဲ့ ခေါင်းဆောင်ကြီးများဖြစ်သလုို့ သျှမ်းနီချစ်တဲ့ သျှမ်းခေါင်းဆောင် သစ်များလည်း ပေါ်ထွက်လာဦးမယ်လုို့ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောရင်း အားလုံးကုိုလေးလျှက် -- ကျားပေါက်
သျှမ်းနီအမျိုးသားတဦး၏ ရင်းတွင်း ဆန္ဒ